Home Wararka Wasiir hore oo muujiyay tuhim dilka Xil. Aamino, kuna baaqay baaritaan caalami...
Wasiir hore oo muujiyay tuhim dilka Xil. Aamino, kuna baaqay baaritaan caalami ah
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, Wasiirkii hore ee Waxbarashada XFS oo kamid ah Dadkii ka badbaaday weeraradii ka dhacay Magaalada Baladweyne 23kii Maarso 2022 ayaa muujiyay tuhun la xiriira sidii loo beegsaday Xildhibaannadda.
Waxa uu sheegay in Dhowr iyo afar cisho uu joogay Baladweyne, halista ugu weyn uu mar weliba arkayay ay tahay Ciidamo hub kala duwan iyo Gaadiid qoryo ku xiran wata, hab maamulka Nabadgalyada oo aan walaac laga qabo iyo Shaqsiyaadka hubeysan oo aan xad lahayn.
Sababta loo beegsaday Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayuu shaki weyn geliyay maadaama qaraxa goobta uu ka dhacay oo ku sifeeyay goob nabadgalyadeeda mas’uuliyad gaar ah la iska saaray sida uu ku dooday Wasiirkii hore ee Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
“Meesha qaraxa uu ka dhacay oo ah meel muhiim ah oo Dad badan ay marayeen ama la heli karay, sababta beegsiga looga dhigtay qoftaas ayaa tuhun keeneyso, waxa ay ila tahay haddii baaritaanno iyo waxaas la sameeyay marka natiijada soo baxdo ayaa faah-faahin laga sameyn karaa, balse tuhunku waa mid Dadka oo dhan wada hadal hayaan” ayuu yiri Wasiirkii hore ee Waxbarashada XFS Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo la hadlay Universal TV.
Madaxweynayaashii hore ee Dalka, Xildhibaanno, Siyaasiyiin iyo Dad kale oo saameyn ku dhex leh Bulshada ayaa dalbaday in baaris madaxbannaan lagu sameeyo qaraxyada ka dhacay Baladweyne oo ay ku doodeen in ay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo abaabulan.
Previous articleCiidamo beeleed aad u hubeysan oo xoog kula wareegay hoolka doorashada Baledweyne
Next articleYaa ku tartamaya doorashada kursiga HoP#058 ee Baladweyne?
Somaliland waxay Taiwan ka door biday saaxiibadii dhalanteedka ahaa
Cali gacal Casir oo Carooday & Gaalkacyo oo Maamul Cusub lagu...